राजेशपायल राई माथी ह’मला गर्ने व्यक्ती, घटनापछी राजेश पायल राईले यस्तो भनेका थिए ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
राजेशपायल राई माथी ह’मला गर्ने व्यक्ती, घटनापछी राजेश पायल राईले यस्तो भनेका थिए !
नेपालका चर्चित गायक राजेशपायल राईलाई हम ला गुर्ने व्यक्तिको पहिचान खुलेको छ । अघिल्लो दिन अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा आयोजित विशेष सांगीतिक कार्यक्रममा राईमाथि पछाडीबाट अंगाल्दै भुईमा लडाउन खोजेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । उनी दावा शेर्पा रहेको रहस्य खुलेको हो ।